Bartamaha dalka dhuxusha NSW, Lithgow waxay u jeesatay qorraxda dusha sare iyo keydinta batteriga Tesla
Golaha Magaalada Lithgow wuxuu smack-bang ku yahay dhulalka dhuxusha ee NSW, hareeraheeda waxaa daadsan saldhigyada korontada ku shaqeeya ee dhuxusha laga helo (badankood way xiran yihiin). Si kastaba ha noqotee, xasilloonida qorraxda iyo tamarta kaydinta korantada ee ay keeneen xaaladaha degdegga ah sida dabka kaynta, iyo sidoo kale himilooyinka bulshada ee Golaha, ayaa ka dhigan in waqtiyadu ay isbeddelayaan.
Nidaamka 74.1kW ee Golaha Magaalada Lithgow wuxuu dusha ka saaran yahay Dhismaha Maamulka wuxuu kor u qaadayaa 81kWh Tesla nidaamka keydinta tamarta batteriga.
Marka laga gudbo Buuraha Buluugga ah iyo bartamaha waddanka dhuxusha ee New South Wales, hooska gaabin ee laba saldhig oo ku dhow dhuxul dhagaxda (mid, Wallerawang, oo ay hadda u xiran tahay tamarta baahsan ee EnergyAustralia), Golaha Magaalada Lithgow ayaa guranaya abaalmarinta qoraxda PV iyo lix Tesla Powerwalls.
Goluhu wuxuu dhowaan rakibay nidaamka 74.1 kW dusha sare ee Dhismahiisa Maamulka halkaas oo waqtigiisa ku bixinayo kor u qaadista nidaamka kaydinta tamarta ee Tesla 81 kWh si ay ugu suurtagasho waajibaadka maamulka habeenkii.
"Nidaamku wuxuu sidoo kale xaqiijinayaa in dhismaha maamulka golaha uu sii shaqeyn karo haddii ay dhacdo koronto la'aan," ayuu yiri Duqa Magaalada Lithgow Duqa Magaalada, Ray Thompson, "oo ka hadlaya sii wanaajinta ganacsiga ee xaaladaha degdegga ah."
81 kWh qiimihiisu yahay Tesla Powerwalls oo gacansaar la leh rogayaasha Fronius.
Dabcan, qiime laguma dhejin karo amniga xaaladaha degdegga ah. Guud ahaan Australia, gaar ahaan gobollada u nugul dabka (sidaa darteed, asal ahaan meel kasta), goobaha adeegga gurmadka ee muhiimka ah waxay bilaabeen inay ogaadaan qiimaha qorraxda iyo keydinta tamarta ay bixin karto haddii ay dhacdo koronto la'aan ay keeneen dabka baahsan.
Bishii Luulyo ee sannadkan, Saldhigga Dab-damiska ee Malmsbury ee ku yaal Fiktooriya wuxuu soo qaatay batari dhan 13.5 kW Tesla Powerwall 2 iyo nidaamka qorraxda ee la socda iyada oo loo marayo deeqsinimo iyo maalgelin laga helo Bank Australia iyo barnaamijka Central Solar Bulk Buy ee Beesha Victoria.
"Baytarigu wuxuu xaqiijinayaa inaan ka shaqeyn karno kana jawaab celin karno xarunta dabka inta ay korontadu go'antahay waxayna sidoo kale xarun u noqon kartaa bulshada isla waqtigaas," ayuu yiri Captain Tony Stephens oo ka tirsan Dab damiska Malmsbury.
In xarunta dabku hada tahay mid aan u nugul karin koronto la'aanta, Stephens waxay ku faraxsan tahay inay ogaato in waqtiyada kala goynta iyo dhibaatooyinka, "xubnaha bulshada ee ay dhibaatadu saameysey ay u isticmaali karaan isgaarsiinta, keydinta daawooyinka, qaboojinta cuntada iyo internetka xaaladaha adag.
Ku rakibida Golaha Magaalada Lithgow waxay ku timid qayb ka mid ah Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee Golaha ee 2030, oo ay ku jiraan himilooyinka kordhinta iyo runtii waarta isticmaalka ilaha tamarta kale, iyo sidoo kale yareynta qiiqa shidaalka qiiqa.
“Kani waa mid ka mid ah mashaariicda Golaha oo looga golleeyahay in lagu wanaajiyo waxtarka iyo waxtarka ururka,” ayuu sii raaciyay Thompson. "Golaha iyo Maamulka waxay sii wadaan inay fiiriyaan mustaqbalka oo ay ka faa'iideystaan ​​fursadaha wax-soo-saarka iyo iskudayista wax cusub oo lagu horumarinayo Lithgow."